Fa maninona i Jennifer? - Countdown ho an'ny Fanjakana
Indray andro, ny Tompo dia nandidy azy hanolotra ny hafany amin'ny Ray Masina, Papa John Paul II. Fr. Seraphim Michaelenko, filoha lefitry ny fampielezana an'i St. Faustina, nandika ny hafatr'i Jennifer tamin'ny teny poloney. Namaky tapakila ho any Roma izy, ary nanohitra ny zava-dratsy rehetra, dia nahita ny tenany sy ny namany tao amin'ny lalantsara anatiny tao Vatican. Nihaona tamin'i Monsignor Pawel Ptasznik, namana akaiky sy mpiara-miasa amin'ny Papa sy Sekreteram-panjakana poloney ho an'ny Vatican izy. Ireo hafatra dia natolotra an'i Cardinal Stanislaw Dziwisz, sekretera manokan'i John Paul II. Tamin'ny fihaonana manaraka. Pawel hoy, "Atsipohy amin'izao tontolo izao araka izay azonao atao ny hafatra."
Hafatra avy amin'i Jennifer
Jennifer - Ho avy ny fanitsiana lehibe
Tsy afaka miafina intsony ny zanak'olombelona.
Jennifer - Miady amin'ny hazakazaka ny zanako
Tsy ny lokon'ny hoditry ny iray no mahatonga fisarahana: fahotana izany.
Jennifer - Mifohaza ny zanako!
Efa niditra tao amin'ny Getsemaneo ianao.
Jennifer - tonga ny fanitsiana lehibe
Rehefa tsy tadiavina intsony ny famindram-poko dia tsy maintsy ho avy ny rariny.
Ho hitan'izy ireo ny fanahiny raha ny fahitako azy.
Jennifer - Nanomboka ny famelabelarana
Horohoro mafy tsy ho ela.
Jennifer - Eo amin'ny mpitsoa-ponenana
Jennifer - Ny rivotry ny lohataona
Mitomany ankehitriny zanako aho fa ireo tsy mety mihaino ny fampitandremako izay dia hitomany rahampitso.
Jesosy ka: Izany no antony maha-zava-dehibe ny hiambenana sy hitandrema hatrany ny fahatongavan'ny ...
Jennifer - Andron'ny fandriam-pahalemana
Jesosy ka: Anaka, efa nandefa tafiotra sy horohoron-tany teto amin'izao tontolo izao aho ho famantarana fa mila ny olombelona ...
Jennifer - Lozan'ny bibikely sy aretina
Jesosy ka, 18 Novambra 2004: Ry oloko, ho tonga ny fahazavana ary hianjera amin'ny olombelona. Ny tara-pahazavana tsirairay izay ...
Jennifer - Toy ny Boxcars
Jesosy ka: Ry oloko, izay tsy manadino ny fitarainako dia hoentina tsy ho ela…
Jennifer - Fikororohana lehibe
Jesosy ka:… horohoro mafy no ho avy satria nanomboka ny tany naneho ny halalin'ny tany ...
← Fa maninona no Gisella Cardia?
Fa maninona i Elizabeth Kindelmann? →